माया, प्रेममा हुनुहुन्छ ? जान्नुहाेस मायामा पर्दा स्वास्थ्य हुने अनगिन्ति फाइदाकाे बारेमा ! – Samacharpati
काठमान्डाैँ, ६ फागुन । माया, प्रेम वा ‘लभ’ले एक अर्कामा सुमधुर सम्बन्ध जोड्ने अवसर मात्र दिँदैन, स्वास्थ्यमै अभूतपूर्व फाइदा गर्छ। मायाका अनगिन्ती स्वास्थ्य फाइदा छन्। मायामा पर्दा स्वास्थ्यमा निम्न नौवटा फाइदा यस्ता छन्ः
बाँके जिल्ला कारागार मानवबस्ती बीचमा रहेकोले सुरक्षामा चुनौती